Imagnetron sputtering ifaka izinhlobo eziningi.Each inemigomo yokusebenza ehlukile nezinto zohlelo lokusebenza.Kodwa kukhona into eyodwa enifana ngayo: ukuxhumana phakathi kwensimu kazibuthe nama-electron kwenza ama-electron ajikeleze azungeze indawo ebhekiswe kuyo, ngaleyo ndlela kwandise amathuba okuthi ama-electron ashaye igesi ye-argon ukuze akhiqize i-ion..I-ion ekhiqizwayo ishayisana nendawo ebhekiswe kuyo ngaphansi kwesenzo senkambu kagesi ukuze ikhafule ilitshe lokuphaka., wonke umuntu uye wamukela kancane odonsa unomphela, nozibuthe bekhoyili abasetshenziswa kakhulu..
Umgomo wokukhishwa kwemvamisa ephakathi nendawo uyefana nowokujuxuza okujwayelekile kweDC. Umehluko ukuthi i-DC sputtering isebenzisa umgqomo njenge-anode, ngenkathi ukukhishwa kwemvamisa okuphakathi kumataniswa. Ukuthi umgqomo ubamba iqhaza yini kumele kunqunywe ukwakhiwa okuphelele, kanye nalo lonke uhlelo Ngesikhathi senqubo yokuxubha, ukuhlelwa kwe-anode ne-cathode kuhlobene. Kunezindlela eziningi zokubamba iqhaza kumjikelezo wesilinganiso. Izindlela ezahlukahlukene zingathola isivuno esihlukahlukanayo semvelo nobukhulu be-ion ehlukile..
Ubuchwepheshe obuyinhloko bokuphindaphindwa kwamaza okuphakathi buhleli ekwakhiweni nasekusebenzisweni kwamandla kagesi. Okwamanje, izindlela zokukhipha ezivuthiwe kakhulu yi-sine wave ne-pulse wave wave. Ngayinye inezinzuzo nezinkinga zayo. Okokuqala, cabanga ngohlobo lwesendlalelo sefilimu bese uhlaziya ukuthi iyiphi indlela yokukhipha amandla efanelekile. Isendlalelo sefilimu, ungasebenzisa izici zokunikezwa kwamandla ukuthola umphumela wefilimu oyifunayo.
Okuqondiwe kusetshenziselwa izinhloso eziphakathi nendawo zemvamisa, kanti ezinye izinhloso zokukhokhuhlela zisebenzisa ama-pair amathathu. Ngokuya ngemvamisa ephakathi nendawo, imisebenzi eminingi ifakwa ngensimbi..Amafishi anjengalawo womshini ngokuvamile enziwa abe makhulu ngokwanele, ezingabeka phansi izingxenye eziningi zomsebenzi, futhi ifilimu ehlanganisiwe iminyene kakhulu..
Prev: Uhlobo olusha lwendlela yokukhiqiza yokukhomba ye-titanium-aluminium alloy
Next: Sibutsetelo semigomo ye-ITO